Kismaayo News » Somaliland oo lagu kala adkaaday
Somaliland oo lagu kala adkaaday
Kn: Natiijadii doorashada Somaliland ee in kabadan todobaadka la sugayay ayaa maanta la shaaciyay in lagu kala adkaaday.
Gudiga doorashooyinka ayaa shaaciyay in xisbiga Kulmiye uu ku guulaystay aqlabiyadda dadkii cod kooda dhiibtay, sidaasi darteedna madaxweynaha xigga ee Somaliland wuxuu noqonayaa Muuse Biixi.
Xisbiga Wadani oo maalmihii hore aad loo hadal hayay inuu doorashada ku guulaysan doono ayaa shalay asagoo ka hor dhacaya faafinta natiijada doorashadii dhacday 13kii bishan sheegay inaysan aqbali doonin, ayagoo sabab uga dhigay in lagu shubtay.
Madaxweynaha cusub ee Somaliland oo saxaafadda ku baahiyay dhawaan aragtidiisa ayaa shacabka iyo masuuliyiinta axsaabta kala duwan ee Somaliland uga mahadceliyay ka midho dhalinta himilada dimiqraadiyadeed ee ay ku faani karaan, wuxuuna ugu baaqay inay ilaaliyaan xasiloonida iyo amaanka.
Dhinaca kale, qadar yar dabadeed shaacinta natiijada doorashooyinka waxaa magaalooyinka waawayn ee Somaliland hareeyay dabaal-degyo ay dhigayaan taageerayaasha xisbiga Kulmiye ayadoo dhanka kalana ay jiraan rabshado ka dhacay magaalooyinka qaar oo ay samaynayeen dhalinyaro caraysan oo taageerayaal u ah xisbiga Wadani kaasi ku andacoonaya in looga shubta doorashada.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale ay rabshadu uga dheceen Somaliland kadib markii ay shaaciyeen xisbiga Wadani in doorashadii dhacday aysan ahayn mid xalaal ah. Ciidamada nabadgaliyada ayaa dad mudaharaad dhigayay magaalooyinka Hargaysa iyo Burco rasaas u adeegsaday, waxaana halkaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray mudaharaadayaal.